December 2010 – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on December 31, 2010 December 31, 2010 by kyawkyawoo
Source; Navedz Words of Love and Words for Love The Quran details seven qualities that Almighty Allah loves and seven… Read more Steps to Gaining Allah’s Love
Posted on December 22, 2010 by kyawkyawoo
အခုတလော ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအတော်များများက အစိုးရတွေနဲ့ မီဒီယာလောကကြီးတစ်ခုလုံး ရင်တမမနဲ့ စောင့်ကြည့်နေကြရတဲ့ဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခု ပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်။ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ လျှို့ဝှက်စာရွက်စာတမ်းတွေကို ‘၀ီကီလိခ်’ ဆိုတဲ့ အွန်လိုင်းမီဒီယာတစ်ခုက ဖွင့်ချဖော်ထုတ်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ ရမ်းတုတ်တွေလည်းပါလိမ့်မယ် အခုလောလောဆယ် ဖော်ထုတ်ထားတာတွေထဲမှာ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တချို့မှာရှိတဲ့ အမေရိကန်သံရုံးတွေက… Read more ၀ီကီလိခ်ဆိုတာ မိတ်ဆွေပါ..(လူထု စိန်ဝင်း)
Posted on December 21, 2010 December 21, 2010 by kyawkyawoo
Causes of sins done by mankind is due to whispering of Satan. In the Holy Quran Allah SWT says, Surah… Read more Cause of Sins and forgiveness in Islam
Posted on December 17, 2010 December 20, 2010 by kyawkyawoo
Why did I choose Islam? Why I’m no longeraChristian? Dr Jerald Dirks is our guest on today’s show,… Read more Dr Jerald F Dirks, Experience ofaMinister who reverted to Islam
Posted on December 9, 2010 December 9, 2010 by kyawkyawoo
အစကတော့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးဖို့မရည်ရွယ်ပေမဲ့ဒီဘလော့မှာ တင်ဖူးတဲ့အီရတ်လူသတ်ပွဲ လို့အမည်ပေးတဲ့ပို့စ်လေးကိုမြင်တော့သူ့ကျေးဇူးကို ပြေးသတိရမိတာနဲ့ရေးဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲဆိုပါစို့။ “အမှန်တရားကိုဖွင့်ချတဲ့စေတမန်ကိုပစ်မသတ်ပါနဲ့”လို့ခေါင်းစဉ်တတ်ထားတဲ့ဝီကီလိခ် စီအီးအို ဂျူလီယန် ရဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးဆောင်းပါးကို ဒီနေ့ထုတ် The Australian Times သတင်းစာမှာဖတ် လိုက်ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဆောင်းပါးကို ဩစတေးလျ နိုင်ငံသား မီဒီယာသန်းကြွယ်သူဌေးရူးပတ်မားဒေါ့ရဲ့ ၁၉၅၈ ခုနှစ်… Read more ဝီကီလိခ်နဲ့ပတ်သက်လို့